LaMetric, famantaranandro marani-tsaina tsy manam-paharoa amin'ny sokajy | Vaovao IPhone
Ao amin'ny tontolo iray izay mifamatotra hatrany, tsy ampy ny famantaranandro birao manan-tsaina ahafahantsika mijery, tsy misy fanelingelenana be loatra, hahalala ny vaovao manandanja indrindra, hampandre anay ny mailaka vaovao na hanomezana vaovao momba anay ny toetrandro any amin'ny faritra misy anay na raha mila mivoaka miaraka amin'ny elo izahay. LaMetric dia izany fotsiny, famantaranandro misy famolavolana handalo azy ho famantaranandro fanairana maoderina sy minimalista, saingy mandeha lavitra kokoa noho ny fifandraisana Internet mahaleo tena ary ny fampiharana azy ho an'ny iOS sy Android izay ahafahantsika manamboatra sy manamboatra azy io araka izay itiavantsika azy.
LaMetric dia famantaranandro, ary famantaranandro fanairana, azo ampiasaina ho mpandahateny Bluetooth sy hihainoana onjam-peo amin'ny Internet ihany koa izy. Fa ny tena mahatalanjona amin'ity vokatra ity dia ny isan'ny rindranasa izay azo apetraka, tsotra be nefa manome azy fampiasa betsaka. Mifanaraka amin'ny tobin'ny toetrandro Netatmo, takamoa Philips Hue, termostat Nest na miaraka amin'ny plugins smart Belkin, WeMo, na mpamaky varavarana peratra sy ny rafitra fanaraha-maso horonantsary. Raha ampiantsika ireo rehetra ireo fa manana fantsona IFTTT manokana ihany koa izy, dia lehibe tokoa ny fahafaha-miditra.
Amin'ny fampiasana tsotra be izay mifototra amin'ny bokotra telo fotsiny, ary fampiharana ho an'ny iOS sy Android izay mamela anao hametraka ny rindranasa tianao indrindra amin'ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fikasihana efijery roa fotsiny, ny vaovao dia indray mipi-maso amin'ny LaMetric. Mahazoa fampandrenesana rehefa misy vaovao ao amin'ny fantsona RSS tianao indrindra, na rehefa mahazo mailaka na voalaza ao amin'ny Twitter ianao, na mamorona hafatra manokana hampisehoana amin'ny efijery sy hampiasanao amin'ny orinasao. LaMetric dia azo vidiana ao amin'ny tranokala ofisialy, ary koa amin'ny fivarotana toa Amazon UK, amin'ny vidiny 200 € eo ho eo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » LaMetric, famantaranandro tsy manam-paharoa amin'ny sokajy misy azy